Epoxy बादल फलाम मध्यवर्ती रंग को भूमिका - समाचार - Zhejiang पूर्वी Argon रासायनिक I/ई कं, लिमिटेड
Epoxy बादल फलाम मध्यवर्ती रंग को भूमिका
को भूमिकाEpoxy बादल फलाम मध्यवर्ती रंग
1. Epoxy बादल फलाम मध्यवर्ती रंग को भूमिका
1. विरोधी जंग र विरोधी जंग प्रभाव बलियो: राम्रो ढाल प्रदर्शन, कोटिंग को भौतिक विरोधी जंग प्रभाव बढाउनुहोस्। पानी वाष्प, इलेक्ट्रोलाइट, आदि सब्सट्रेट मा घुस्न र सब्सट्रेट संग प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। स्केली अभ्रक फलाम अक्साइड कोटिंग बाट लाभ उठाउनुहोस्।
2. कोटिंग लागत घटाउनुहोस्: रंग कोटिंग को मोटाई विरोधी जंग र विरोधी जंग को प्रभाव मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ। 120 structuresm घर भित्र र 150Î¼m बाहिर: इस्पात संरचनाहरु को लागी anticorrosive रंग कोटिंग्स को कुल डिजाइन मोटाई को लागी विशिष्टता। मध्यवर्ती रंग कोटिंग उही विरोधी जंग प्रभाव छ, र लागत मात्र प्राइमर शीर्ष कोट को तुलना मा कम छ।
3. विरोधी जंग अवधि विस्तार: कोटिंग को उही मोटाई, डिजाइन विनिर्देशों को अनुरूप को मामला मा, मध्यवर्ती रंग को विरोधी जंग कोटिंग को उपयोग, र सेवा जीवन कोटिंग को कि भन्दा लामो छ कि मात्र प्राइमर र शीर्ष कोट को उपयोग गर्दछ।
4. विशेष उद्देश्य: epoxy अभ्रकEpoxy क्लाउड फलाम मध्यवर्ती रंगअकार्बनिक जस्ता धनी प्राइमर को सतह मा एक मुहर को रूप मा प्रयोग गरीन्छ; जब topcoat एक alkyd संशोधित topcoat हो, जस्ता धनी प्राइमर epoxy अभ्रक मध्यवर्ती रंग संग प्रयोग गर्नु पर्छ।
2. Epoxy बादल फलाम मध्यवर्ती रंग र epoxy अभ्रक antirust रंग को बीच फरक
1. epoxy अभ्रक विरोधी जंग रंग epoxy राल मा अभ्रक थपेर तयार अल्कोहल phenolic अभ्रक पछि महत्वपूर्ण रंग किस्महरु मध्ये एक हो। यो व्यापक रूप मा भारी शुल्क कोटिंग सिस्टम मा एक विरोधी जंग आधार को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। रंग र मध्यवर्ती रंग को उपयोग।
2. Epoxy अभ्रक विरोधी जंग रंग, नाम को रूप मा, लामो समय सम्म एक विरोधी जंग प्राइमर को रूप मा प्रयोग गरीएको छ। कोटिंग फिल्म मा यसको राम्रो विरोधी permeation प्रभाव को कारण, मीका व्यापक रूप मा भारी शुल्क anticorrosive कोटिंग सिस्टम मा मध्यवर्ती रंग को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। यो प्राय epoxy अकार्बनिक जस्ता धनी प्राइमर र aliphatic polyurethane शीर्ष रंग संग संयोजन मा प्रयोग गरीन्छ।
३Epoxy क्लाउड फलाम मध्यवर्ती रंगयस आधारमा विकसित गरीएको छ थप भरण बक्स अभ्रक अझ परिरक्षण प्रभाव लाई सुदृढ पार्न। यो मात्र एक मध्यवर्ती रंग को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक विरोधी जंग प्राइमर को रूप मा छैन।
4. प्रोटोटाइप epoxy अभ्रक मध्यवर्ती रंग, मात्रा ठोस सामग्री 80०% भन्दा कम छ, र अभ्रक संरचना (भोल्युम अनुपात) वर्णक को %०% भन्दा बढी को लागी खाता। बाक्लो फिल्म निर्माण प्रयोग गर्न सकिन्छ, र एकल निर्माण को सूखी फिल्म मोटाई १००-३००Î¼m पुग्न सक्छ। Epoxy क्लाउड फलाम मध्यवर्ती रंग, यो पूरै कोटिंग प्रणाली को विरोधी जंग प्रदर्शन बढाउन को लागी विरोधी जंग प्राइमर को रूप मा जस्ता धनी प्राइमर को उपयोग गर्न को लागी राम्रो छ।
अघिल्लो:भुइँ रंग को रखरखाव
अर्को:Epoxy जस्ता धनी प्राइमर को आवेदन